သူတို့ရဲ့သူငယ်၏ကျန်းမာရေးနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုဖျက်ဆီးဖို့9နည်းလမ်းများ
လေ့ကျင့်ရေး, ကျန်းမာခြင်း, ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေး, မိခင် / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
မိဘများကျန်းမာများနှင့်အောင်မြင်သောကလေးကတက်ရောက်စေဖို့ဘာမှလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေသောခေါင်းစဉ်: အစောပိုင်းအနှီးထဲတွင်အားကစား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, စည်းကမ်း, အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်သင်ကြားရေးနည်းစနစ်များ။ ထိုသို့သင်ကလေးထိခိုက်စေနိုင်သောပြင်ပကမ္ဘာ, မထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကိုလက်မခံရပါလိမ့်မယ်။
ကျန်းမာခြင်း, ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေး / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
နွားမရဲ့နို့ကြောင့်အများအပြားအသုံးဝင်သောအရည်အသွေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်း, သုံးနှစ်ဖို့ခေတ်သစ်ကလေးအထူးကုလေးတွေအစားအသောက်များတွင်တက်အတွက်ကြိုဆိုမပေးပါ။ ဒါကြောင့်အပေါ်အခြေခံပြီးသူ့ရဲ့အရသာနှင့်အခွင့်အလမ်းကွဲပြားခြားနားသောဟင်းလျာများချက်ပြုတ်ဘို့, နို့များစွာသောလူတို့ကချစ်ပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့
ကလေးသူငယ်အခမွေးဖွားခဲ့သည်! ကျန်းမာရေးနှင့်ဘဝ၏ပထမလအနည်းငယ်အတွင်းကလေး၏သာယာဝပြောရေးစောင့်ရှောက်မှုအပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခိုသည်။ ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်ဆေးရုံမှာနေတုန်းပဲ mom, များအတွက်စတင်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ GAZ ကားထိုကဲ့သို့သောမနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောနေကြသည်။ ပိုပြီးအသေးစိတ်၌ဤအကြောင်းပြောဆို - သူတို့ဘယ်လို GAZ ကားများဖယ်ရှားပစ်ရမယ့်မွေးကင်းစကလေးငယ်ကိုကူညီရန်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့ဘာလဲ။ GAZ ကားအကြောင်းတရားများကြောင့်အသိအမှတ်ပြု ...
သင့်ရဲ့အစာအိမ်အတွက်ဂျစ်ကားနှင့်အတူသင့်ကလေးကိုကူညီပေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? Read more »
ငါ orthopedist ကလေးဆကျဆံမြင်လျှင်, ငါတုန်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါမူကားကိုယ့်မိန်းမောတွေဝေပဲ!
ကျန်းမာခြင်း, ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေး, interesnenkoe / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
ဤဗီဒီယိုအားစိန့်ပီတာစဘတ်ထဲမှာဆေးခန်း Ott အတွက်အများဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆရာဝန်တဦးတည်းဆန်းစစ်သူကအင်တာနက် mom,, မွေးကင်းစကလေးအပေါ် posted ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးနောက်အလွန်ရောနှောခံစားချက်တွေကိုရှိပါတယ်။ မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: ကလေးများ၏ကုသမှုသို့မဟုတ်မထီမဲ့မြင်ပြုတတ်ပါသလဲ သင်ကမြင်သောအခါ, သင်ဆဲ orthopedist မှထိုသူငယ်နှင့်အတူသွားချင်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောကြိုတင်ကာကွယ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ဆင်တူ ...
ငါ orthopedist ကလေးဆကျဆံမြင်လျှင်, ငါတုန်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါမူကားကိုယ့်မိန်းမောတွေဝေပဲ! Read more »
ကလေးငယ်တစ်ဦးအတွက်ချောင်းဆိုးခြင်း၏အကြောင်းတရားများကလေးငယ်များအတွက်အများဆုံးမကြာခဏ (ဖြစ်ပွားမှု 90% အတွက်) ချောင်းဆိုးစူးရှသောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု (Ari) ၏လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တစ်ဦးကူးစက်-ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ကိုအထက် (နှာခေါင်း, nasopharynx, oropharynx) နှင့်အောက်ပိုင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်း (အသံအိုး, trachea, bronchi, အဆုတ်) တွင်ဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ကလေးများအတွက်ချောင်းဆိုး၏နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းအထက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်း (နှာခေါင်း, sinuses, pharynx) ၏ရှေ့မှောက်တွင်တစ်ဦးရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ...
တစ်ဦးမွေးကင်းစကလေးအတွက်ချောင်းဆိုး Read more »